माछीले लेउ खाँदा काटियो एक करोडको केक ! « Ramailo छ
माछीले लेउ खाँदा काटियो एक करोडको केक !
समय : 12:16 pm
कार्टुञ्ज क्रुका सरोज अधिकारी, आश्मा विश्वकर्मा र नायिका प्रियंका कार्की फिचरिंग माछीले खाने पानीको लेऊ लाई दुई महिना नपुग्दै एक करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो खुसीयालीमा गायक सरोज ओलीले बुधबार केक काट्दै खुसीयाली साटे ।
केक काट्ने कार्यक्रममा प्रियंका र सरोज आश्मा उपस्थित थिए । उनीहरुले एक अर्कालाई केक खुवाउँदै खुसीयाली साटे । बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको गीतमा दिनेश थपलियाको शब्द छ । स्वरमा गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छन् । उदयराज पौडेलले संगीत संयोजन गरेका छन् । कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको भिडियोलाई सुदीप बरालले खिचेका हुन् । भिडियो हेर्नुस :
केक काट्ने कार्यक्रममा गायक ओलीले अर्को गीत पनि ल्याउन लागेको खुलाए । उनले गाएका जता जता पिरतीको बाटो, तिमीलाई देखेपछि आइलभ यु भन्न मन लाग्यो जस्ता गीतहरु युवा पुस्तामाझ हिट छन् ।